Axmed C. Geelle oo ka hadlay Kharashka shirkadaha Caymisku saareen Berbera
Home WARARKA Axmed C. Geelle oo ka hadlay Kharashka shirkadaha Caymisku saareen Berbera
Berbera-(Berberanews)-Maareeyaha Guud ee Shirkadaha Laas Group Axmed Cismaan Geelle, ayaa la hadlay kharashaad xad dhaafa oo shirkadaha Caymiska Maraakiibtu saareen gaadiidka ganacsi ee imanaya Marsada Magaaalada Berbera.
Ganacsade Geelle, waxaa uu hoosta ka xariiqay in tallaabada shirkadahaasi saareen Berbera uu yahay mid aan habboonayn, maadaama Berbera iyo Sonaliland ay yihiin deegaan nabadgelyo ah oo aan amni darro ka jirin.
Axmed Cisman Geelle waxaa uu sidaa ka sheegay kulan saddex geesood ah oo shalay yeesheen Shirkadda Ethiopian Maritime Logistics Service, Rugta Ganacsiga iyo shirkadda ISS oo ka mid ah shirkadaha Axmed Cisman Geelle ee ka shaqaysa dhinaca Logistikada.
Isagoo arrimahaas ka hadlaya waxaa uu yidhi “Waxaanu ognahay in Berbera ay hore ugu soo rogeen kharashaad dheeraada Shirkadaha caymiska ee aduunku, kaasoo la xidhiidha xaaladaha waddamada ay dagaalladu ka ooganyihiin. Laakiin waddankeena taasi kama jirto.
Maalgelinta weyn ee ay sammaysay Shirkadda Dp World iyo shirkadda weyn ee Ethiopia ay maraakiibteedu yimaadeen dekedda weyn ee magaalada Berbera ayaa kharashaadkaas dhimaya ama meesha ka saaraya. Shirkadaha Caymisku waa inay tacaariiftooda ku salleeyaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada Berbera.
Axmed Geelle waxa uu ganacsatada u soo jeediyay inay ku qanciyaan dilaalinta maraakiibta soo rara inay Berbera tahay deked nandoon oo caalaniya “Somaliland waxay lahayd taariikh nabadeed oo soo taxnayd sanadihii la soo dhaafay ganacsatada Somaliland waa inay ku qanciyaan dillaaliinta maraakiibta soo raraya inay Berbera tahay deked caalamiya oo shaqaynaysa islamarkaana ay marin u tahay Ethiopia oo ku xidhaysa dunida inteeda kale.”
axmed cismaan geele
Previous articleMarkab weyn oo Itoobiya Leedahay oo ku soo xidhay Dekedda Berbera
Next articleSucuudiga oo cunoqabatayn saaray Imaaraadka